नयाँ वर्षलाई शेयर बजारको हरियो रङ्गको स्वागत, ११८८ विन्दुमा परिसूचक | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण नयाँ वर्षलाई शेयर बजारको हरियो रङ्गको स्वागत, ११८८ विन्दुमा परिसूचक
on: April 15, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
नयाँ वर्षलाई शेयर बजारको हरियो रङ्गको स्वागत, ११८८ विन्दुमा परिसूचक
वैशाख २, काठमाडौं (अस) । नयाँ वर्षको पहिलो व्यापार दिनमा नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । सोमवार नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ७० अंकले बढेको छ । परिसूचक बढेपनि कारोबार रकम भने घटेको छ । उतारचढावमा रहेको परिसूचक अन्त्यमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशतले बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक १ हजार १ सय ८८ दशमलव ७१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यसदिन जलविद्युत, वित्त कम्पनी, ‘अन्य’ र जीवन बीमा समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र शेयर बजार उकालो लागेको हो । लघुवित्त समूहको परिसूचक ३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले बढेको छ ।
सोमवार रू. ३० करोड ४५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन यो रकम रू. ९ करोड १८ लाख घटेको हो । यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत बढेर २ सय ५४ दशमलव ७७ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार भएका १ सय ६५ कम्पनीमा ८४ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ५५ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २६ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य ७ दशमलव ५६ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ ।
कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ७२ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार २५ मा कारोबार भएको हो । साथै, साना किसान विकास बैंकको शेयर मूल्य ६ दशमलव ४५ र डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६ दशमलव २४ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल कम्युनिटि डेभलपमेण्ट बैंकको शेयर मूल्य भने ६ दशमलव ८९ प्रतिशतले घटेर रू. १ सय ३५ मा सीमित रहेको छ ।
नेको इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ५ सय २२ मा रू. २ करोड ७५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । साथै, कुमारी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, एनएमबि बैंक, प्रभु बैंक, साना किसान विकास बैंक रू. १ करोडभन्दा बढी रकमको शेयर कारोबार भएको छ ।